दहीका साथमा बेसारको प्रयोग यसरी गर्दा ५ फाइदा « Nagarik Khabar
दहीका साथमा बेसारको प्रयोग यसरी गर्दा ५ फाइदा
प्रकाशित मिति : 14 January, 2022 9:03 pm
एजेन्सी । हुनत चिसो मौसम त्यसमा पनि कोरोनाको कहर । दही खानु त्यति उचित नहुन सक्छ । तर, दहीले मानव शरीरमा पार्ने प्रभावका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइएको छ । दहीका साथमा बेसारको प्रयोगले के कस्तो फाइदा होला आउनुहोस् चर्चा गरौं ।
बेसार र दहीको लगाउँदा तपाइँको छालामा धेरै प्रकारले फाइदा पुग्दछ । बेसारमा एन्टीसेप्टिक, एण्टीफ्लामेट्री, एण्टीबेक्टेरियल र एन्टी एजिङ्ग गुण हुन्छ । त्यसैगरि दहीमा जिङ्क, क्याल्शियम, भिटामिन बी र ल्याटिक एसिड पाइन्छ । यी दुबै चिज छालासँग सम्बन्धी समस्याका लागि उपयोगी मानिन्छन् ।
– बेसार र दहीको प्रयोगले छालामा निखार ल्याउँछ । यसमा रहेको जिङ्क र म्याग्नेसियम जस्ता तत्वका कारण छालामा फाइदा पुग्दछ । दही, बेसार, बेसन र गुलाब जल मिसाएर पेस्ट बनाउने र त्यस पेस्टलाई अनुहारमा लगाएर १० मिनेटसम्म राख्ने अनि सफा पानीले धुँदा अनुहारमा निखार आउँदछ ।
– दही र बेसारको प्रयोगले छाला चाउरिने पनि ठीक हुन्छ । बेसार र दहीमा बुढ्यौलीपन कम गर्ने गुण हुन्छ । दहीमा रहेको भिटामिन ए र जिङ्कको मात्राले छालाको लचिलोपन कम गरी कसिलो बनाउँदछ ।
एक चम्चा बेसार, एक चम्चा दही र एक चम्चा एलोवेरा जेल अर्थात गुलाब जलको केही थोपा एक कचौरामा मिलाएर पेस्ट तयार गर्ने र अनुसारमा लगाउने । १५ मिनेटपछि मनतातो पानीले अनुहार पाखाल्ने । यसले अनुहारमा चमक प्रदान गर्दछ ।
– बेसार र दहीका सार्थ गुलाब जलको मिश्रणमा चन्दन पाउडर मिलाउने र त्यसलाई अनुहार र गर्धनको भागमा लगाउने । उक्त फेसप्याक सुकेपछि चिसो पानीले धुने गर्दा अनुहारका दाग–धब्बा कम हुन्छ ।
बेसार र दही
जाडो रातमा स्वेटर मात्र लगाएर सुत्नु हुन्छ ? यस्तो छ बेफाइदा
एजेन्सी । जाडोको मौसम छ । ऊनीका लुगा वा विशेष गरी स्वेटर सबैलाई प्रिय लाग्छ
दाँतकाे पहेँलाेपन हटाउने यी टिप्स्
एजेन्सी । धेरै चिया र कफी पिउँने आदत हुने र मुखको स्वास्थ्यको ख्याल नहुने मुख्य
कति हुनुपर्ला तपाईंको बच्चाको उचाई ? बच्चाकाे विकासमा प्रभाव के काे ?
एजेन्सी । मानिसहरु आफ्ना बालबालिकाको उचाईलाई लिएर धेरै चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । आकर्षक व्यक्तित्वका